UPDATE: Dab dhimasho sababay oo caawa ka kacay guri ku yaalla magaalada Baydhabo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Dab dhimasho sababay oo caawa ka kacay guri ku yaalla magaalada...
UPDATE: Dab dhimasho sababay oo caawa ka kacay guri ku yaalla magaalada Baydhabo
Baydhabo (Halqaran.com) – Warar goor-dhow naga soo gaaray Magaalada Baydhabo ee xarunta KMG maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in caawa dab xooggan uu ka kacay guri ku yaallo Magaalada, kaasi oo sababay Khasaare dhimasho ah.
Wararka ayaa sheegaya in saddex ruux oo ku sugnaa guriga dabka uu ka kacay in ay ku geeriyoodeen dabkaasi, waxaana saddexda ruux ay kala ahaayeen Aabe iyo laba carruur uu dhalay.
Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga dabkaan waxa sababay, balse xaafadda amuurtaan ay ka dhacday, ayaa waxaa lagu magacaabaa Hawlwadaag, gaar ahaan wadada aada Onodka Baydhabo.
Dadka deegaanka ayaa sheegay Aabaha guriga iyo labada carruur in laga badbaadin waayay xaaladda dabka ugu dambeyna ay ku geeriyoodeen.
Aabaha dhintay ayaa magaciisa waxaa lagu soo koobay Cumar sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen.
Magaalada Baydhabo ayaa waxaa taalla hal dabdamis oo dhex taalla Garoonka Diyaaradaha Shaati gaduud ee Magaaladaasi, waxaanan jirin dab-damis kale oo magaalada laga isticmaalo.
Dab dhimasho sababay oo caawa ka kacay guri ku yaalla Baydhabo